Hello Nepal News » ह्यारी केन भित्र्याउने दौडमा ग्वार्डिओला : मूल्य कति ?
ह्यारी केन भित्र्याउने दौडमा ग्वार्डिओला : मूल्य कति ?
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका प्रमुख प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला लिग प्रतिस्पर्धी टोटनह्यामका फरवार्ड ह्यारी केनलाई भित्र्याउने कसरतमा लागेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । स्पेनिस बार्सिलोना छाडेपछि हालसम्म पनि च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेका ग्वार्डिओला सिटीबाट सो उपाधि जित्न र टिमलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउन केनलाई अनुबन्ध गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।
जारी सिजनको अन्त्यपछि सिटीले फ्रि ट्रान्सफमा बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सीलाई पनि भित्र्याउने तयारी गरेको चर्चा छ । यसैबेला सिटी केनको विषयमा गम्भीर ढंगले लागेपछि ग्वार्डिओलाले आगामी समर विन्डोलाई विशेष बनाउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त सिटीमा अहिले पनि गोलकर्ता खेलाडीको कुनै अभाव छैन । च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेकै अवस्थामा पनि सिटीको फरवार्ड लाइनलाई युरोपकै टप–३ मा गनिन्छ ।
तर, सर्जियो अगुएरोको सिटीसँग सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसँगै समाप्त हुँदैछ । अर्का फरवार्ड ग्याब्रिएल जेसस लयमा फर्किन नसकिरहेका बेला सिटीले यो सिजन मजबुत सुरुआत गर्न सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा सिटी यसपटक ठूला प्रतियोगिताको उपाधि दाबेदार देखिँदैन । प्रिमियर लिगमा ऊ निकै पछि छ । च्याम्पियन्स लिगमा पनि सिटीको प्रदर्शन उति शानदार रहेको छैन ।
तर, के सिटीको योजनाअनुसार टोटनह्यामले आफ्ना सबैभन्दा प्रमुख र यो सिजन लिगकै नम्बर वान खेलाडी आफ्नो सोझो प्रतिस्पर्धी क्लबलाई बेच्न तयार होला ? यो उति सहज देखिँदैन । जर्मन मिडिया ‘बिल्ड’का अनुसार सिटी केनका लागि ९० देखि १०० मिलियन पाउन्ड सरुवा फी तिर्न तयार हुनसक्छ । तर, हालको सरुवा बजारमा २७ वर्षीय केनको मार्केट भ्यालु २०० मिलियन युरो आसपास रहेको छ ।
केही इंग्लिस मिडियाले यस्तो रिपोर्ट छापेका छन् कि, यदि ग्वार्डिओला बार्सिलोनाका मेस्सीलाई भित्र्याउन असफल भए मात्रै केन भित्र्याउन अग्रसर हुनेछन् । तर, मेस्सी आउने अवस्थामा सिटीले केनका लागि मोटो बजेट खर्च नगर्न सक्छ । त्यसै पनि टोलीमा मुख्य भूमिका नपाउने अवस्थामा केन सिटी सरुवाका लागि तयार हुनेछैनन् । किनभने, उनी टोलीको प्रमुख खेलाडी बन्न र उपाधि जित्न चाहन्छन् ।
टोटनह्यामले केनलाई सिटीका लागि नछाड्ने अर्को कारण यो पनि छ कि, हाल जोसे मोउरिन्होको नेतृत्वमा टोटनह्याम सही दिशामा छ । उसले यो सिजन सबै प्रतियोगितामा राम्रो सुरुआत गरेको छ । केही समयअघिसम्म टोटनह्याम प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमै थियो । अहिले ऊ शीर्ष स्थानमा फर्किन प्रयासरत छ । यदि टोटनह्यामले मोउरिन्होको कमान्डमा उपाधि जित्ने दिशा समाते केनले क्लब छाड्नेछैनन् । किनभने, केन टोटनह्यामलाई केही न केही उपाधि जिताउन चाहन्छन् ।
उमेरले २७ वर्ष पुगेका केन सन् २००९ देखि लगातार टोटनह्याममा खेलिरहेका छन् । स्थायनी रूपमा उनले क्लब फेरेका छैनन् । तर, विभिन्न पटक गरेर तीन सिजन अन्य ठाउँबाट लोनमा खेलेका छन् । सिजन २०१३–१४ बाट भने उनी लगातार टोटनह्याममै छन् । सो क्लबसँग उनको निकै गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । तर, उनले आजसम्म सो क्लबबाट ठूला उपाधि जित्न सकेका छैनन् ।
टोटनह्यामका लागि उनले हालसम्म कूल ३१० खेल खेल्दै कूल २०४ गोल गरेका छन् । जारी सिजन शानदार लयमा रहेका केनले हालसम्म सबैखाले प्रतियोगितामा २३ खेल खेल्दै १६ गोल र १० असिस्ट गरिसकेका छन् । प्रिमियर लिगमा मात्रै उनले १५ खेलबाट ९ गोल र १० असिस्ट गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति १८ पुष २०७७, शनिबार ११:४६